Jonga uGoogle Earth uququzelela kwi-Excel- kwaye uwaguqulele kwi-UTM-Geofumadas
Ikhaya/Ukulanda/Jonga uGoogle Earth uququzelela kwi-Excel-kwaye uwaguqulele kwi-UTM
UkulandaGoogle umhlaba / imephu
Ndinedatha kuGoogle Earth, kwaye ndifuna ukubona uququzelelo kwi-Excel. Njengoko ubona, ngumhlaba onee-vertices ezisixhenxe kunye nendlu enee-vertices ezine.
Gcina idatha yeGoogle Earth.
Ukukhuphela le datha, cofa ekunene ku "Iindawo zam", kwaye ukhethe "Gcina indawo njenge..."
Ukuze ube yifayili eneemigca, amanqaku kunye neepropati endiziguqule kwiimpawu, ifayile ayiyi kugcinwa njenge-kml elula kodwa njenge Kmz.
Iyintoni ifayile yeKMZ?
I-kmz iseti yeefayile ze-kml ezixineneyo. Ke eyona ndlela ilula yokuyivula izip njengoko sinokwenza nge.zip okanye kwifayile ye .rar.
1. Inketho yokubona ulwandiso lwefayile luvuliwe, ukusuka kwithebhu ethi "Jonga" yomhloli wefayile.
2.Tshintsha ulwandiso ukusuka .kmz ukuya kwi .zip. Ukwenza oku, unqakrazo oluthambileyo lwenziwa kwifayile, kunye nedatha emva kokuba inqaku liguquliwe. Samkela umyalezo oza kuvela, osixelela ukuba siyatshintsha ulwandiso lwefayile kwaye inokwenza ukuba ingenakusebenziseka.
3. Ifayile ayixinzelelwanga. Iqhosha lasekunene le mouse, kwaye ukhethe "Khipha ku ...". Kwimeko yethu, ifayile ibizwa ngokuba yi "Geofmed Classroom Land".
Iyiphi ifayile ye-Kml?
I-Kml yifomathi edumileyo yiGoogle Earth, eyayiphambi kwenkampani ye-Keyhole, yiyo loo nto igama (uLwimi lweeNkqantosi zeKholehole), ke, yifayile ekwimeko yeXML (uLwimi lweMarket eXtensible). Ke ukuba yifayile yeXML kufuneka ikwazi ukujongwa kwi-Excel:
Kwaye, ngoku sineGoogle Earth idibanisa iifayile, kwitafile ye-Excel. Ukuqala ukusuka kumqolo wama-29, kwikholamu X kuvela amagama ezinto, kunye nobude buhamba ngokudibanisa kwikholamu AH Ndizifihlile ezinye iikholamu, ukuze ubone ukuba kwimiqolo yama-40 neyama-41 ungazibona iipoligoni ezimbini endizizobileyo, kunye nothungelwano lwazo lokudibanisa.
Ngoko, ngokukopisha iikholomu ze-X kunye nekholeji ye-AH, unayo izinto kunye nokulungelelaniswa kweendawo zakho zeGoogle Earth.
Siyathemba ukuba oku ngasentla kukuncede ukuba uqonde indlela yokugcina idatha yeGoogle Earth kwifayili ye-kmz, kunye nokuqonda indlela yokudlula ifayile ye-kmz ukuya kwi-kml, ekugqibeleni indlela yokujonga i-Google Earth isebenzise i-Excel.
Guqula idatha kwiGoogle Earth ukuya ku-UTM.
Thumela idatha esuka kwi-Google Earth kwi-AutoCAD.
Unokufumana itemplate PayPal okanye Credit Card. Xa usenza intlawulo, ufumana i-imeyile enekhonkco lokukhuphela. Ukuthenga itemplate kukuvumela ukuba uthumele i-imeyile ngenkxaso, kwimeko apho unengxaki netemplate.
Ihlazo, ngaphezulu okanye i-Google Earth ayivumeli ukudala iipolgoni kunye neempawu ze-precisão aceitáveis. I-melk fazê-lo em outro ye-GIS inkqubo kwaye uyithumele kwi-Google Earth.
Gília Josina uthi:
Ndingayongeza njani i-polygon engekho iGoogle emhlabeni?
Kubalulekile ukubeka amanqaku okuqala kwaye uyongeze okanye ipoloni ngendlela eqhelekileyo ukuze udibanise indawo. Kodwa kwenzeka ntoni xa i-faando okanye i-Zoom inikeza indawo yomsebenzi, okanye i-ponto ne-sobrepõe ao okanye i-polygon, deixando umgama omkhulu wephutha phakathi kwe-polygon apho ponto.
Okanye, kufuneka ndidibanise i-polygon engekho umhlaba we-google (unokusuka kwi-excel, i-melhor)
Ndiyathemba ukuba ndiyatshintsha kwaye i-muito obrigada!
Ifayile yefayile yefayile, qhafaza iifayile chuyển đổi này với, imeyile nguyenbahiep775@gmail.com. Rất cảm ơn anh.
Kulekhonkco ahlukeneyo amaphepha adibanayo onokuyifumana kwiikhowudi ze-transcode
hi geofumadas, iingcebiso ezifanelekileyo zokusebenzisa umhlaba weGoogle, inceda kum eninzi kum msebenzi wam.
inkxaso, apho ndiyakwazi ukukhuphela iFOMU YOKUCHINTSHA ULWIMI LWABAHLANGISI BEJOGRAPHI (X, Y, Z) E-UTM, ndiyayifuna.
Ndilindele amazwana akho